Showing ५१-६० of ६५२ items.
प्रतिक्षित फिल्मको रुपमा लिईएको आर्यन सिग्देल र साम्राज्ञी स्टार कायराको बारेमा आर्यन सिग्देल निकै मौन छन् । आर्यन यही फिल्मबाट आफनो गुमेको स्टारडम फर्काउँने प्रयासमा छन् सोही कारण पनि उनले कायराको बारेमा बोलेका छैनन् भने फिल्मका फोटो वा कुनै पनि जानकारीहरु आउट गरेका छैनन् । तर कुनै न कुनै रुपबाट कायराका तस्बिर र जानकारीहरु बाहिरीरहेका छन् । कायराको बारेमा आर्यन ठस न मसको अवस्थामा छन् तर फिल्मकी नायिका साम्राज्ञी भने कायराको तस्बिर , साउण्डबिनाका भिडियोहरु पोस्ट गरिरहन्छिन् । सोही कारणले पनि कायराप्रतिको चासो सेलाएको भने छैन् । उता आर्यन मौन छन् तर सामाजिक सञ्जालमा निकै सक्रिय साम्राज्ञीले
प्रकाशित मितिः जेठ २३, २०७५
कोर्ट निर्माणका लागि कन्सर्ट
बेलबारी । मोरङको बेलबारीमा बास्केट वलको कोर्ट निर्माणका लागि आयोजित सांगीतिक सहयात्रा कार्यक्रम शनिवार साँझ सम्पन्न भएको छ । बेलबारी बास्केट वल क्लवद्धारा आयोजित सांगीतिक सहयात्रा कार्यक्रममा चर्चित पप गायक नितेशजंग कँवरले सांगीतिक प्रस्तुति संगै युवापुस्ताका संगीतप्रेमीहरुलाई नचाएका थिए । नेपाली लोकसंगीतलाई नयाँ पुस्ताको रुचिलाई जोडेर तयार पारेका गायक कुँवरले धेरै गीतहरु गाएका थिए । नेपाली पप संगीतमा चर्चामा आएका नितेशजंगले हाम्रो नेपाल बोलको देशभक्ती गीतबाट आफ्नो प्रस्तुति शुरुवात गरेका थिए । गायका नितेशले सिन्धुली गडी घुमेर आउँदा ...फिर्ती माया...लगायत आधा जर्दन बढी गीतहरुहरु गाउँदा युवादर
१,१०० पटक पढिएको
बाल गायक अशाेक दर्जीको घर निर्माणकाे लागी सहयाेग
बिर्तामोड । गायनबाट सानै उमेरमा चर्चामा आएका दमकका असोक दर्जीको घर निमाणनार्थ झापा बिर्तामोडको ग्यालेक्सी फिटनेस र युवा ब्यवसायीहरुले ५१ हजार एकसय आर्थिक सहयोग प्रदान गरेका छन् । ‘मन विनाको धन ठूलो कि, धन विनाको मन’ को गीतसँगै चर्चामा रहेका संगीतकार टंक बुढाथोकी र गायक दर्जीलाई उनको घर निमाणका लागि ग्यालेक्सी फिटनेसमा कार्यक्रमको आयोजना गरी शनिवार सो रकम हस्तान्तरण गरिएको हो । अभियान नेतृत्वकर्ताहरु फिटनेस सञ्चालक चन्द्र राना लाफा, संन्दिप शेर्मा र युवा तथा व्यवसायीहरु प्रेम राजवंशी, रोहित गजमेर, भिम लिम्बु, चन्द्र लिङ्देन र प्रकाश चौधरीले संगितकार बुढाथोकी र गायक दर्जीलाई रकम हस्तान्तरण गरे
प्रकाशित मितिः जेठ १३, २०७५
अनमाेल केसी र झरना थापाकी छाेरी सुहानाले राेमान्स गर्ने
सुपरस्टार अनमोल केसी 'ए मेरो हजुर' को तेस्रो सिरिजमा अनुवन्धित भएका छन् । शनिवार निर्माता सुनिल कुमार थापा र निर्देशक झरना थापाले उनलाई साइन गरेका हुन् । यस फिल्मबाट झरनाकी छोरी सुहाना थापाले डेब्यू गर्दैछिन् ।
१,०८३ पटक पढिएको
चलचित्र क्षेत्रमा नवप्रवेशी कलाकारको आगमन बढ्दो छ । त्यसमा पनि १६/१७ वर्ष पार नगर्दै नायिका हुने हुटहुटि धेरै नै छ । यस अघि केही म्यूजिक भिडियोमा अभिनय गरेकी कला राई हिरोइन हुने उद्देश्यले यतिबेला जोडतोडका साथ लागिपरेकी छिन् । ‘मुर्चुङ्गा’ नामक फिल्मबाट डेव्यू गरेकी कलासँग गरेको रोमान्टिक कुराकानी : तपाई त कति व्यूटिफूल हुनुहुदोरहेछ ? नाई छैन । म जस्ता धेरै केटाले भनेका होलान् नी ? केटीहरुले चाही भन्छन् म केटा भइदिएको भए तलाई नी बिहे गर्थे भनेर । (हा..हा) अचेलका केटाले त बिहे भन्दा लभ मात्र गरौ भन्दा हुन् नी त ? अब प्रस्ताव धेरै नै गरेका छन् । तर मेरो तर्फबाट चाहि नो थ्याङ्क्यू भन्ने
राेमान्टिक मुडमा सलाेन र करिश्मा
चलचित्र ‘बाबु कान्छा’ को पोष्टर रिलिज भएको छ । पुराना एवं पाका निर्देशक शोभित बस्नेतको निर्माण तथा निर्देशनमा तयार यो चलचित्र आगामी असार २९ गते अल नेपाल प्रदर्शनमा आउनेछ ।
चलचित्र भैरेकाे पाेस्टर सार्वजनिक
टेष्टी टेष्टी मिस एसईईको ताज सुनाखरीकी नविनालाई
धरान । पाँचौं टेष्टी–टेष्टी मिस एसईई–२०१८ को उपाधि सुनाखरी एकेडेमीकी नविना मगरातीले जितेकी छन् । धरान–८ सभागृहमा शनिबार राति सम्पन्न फाइलनमा २९ स्पर्धीलाई पछि पार्दै उनले ताज जितेकी हुन् । विजयपुर स्कुलकी तङ्नाम तुम्बाहाम्फे फष्ट रनर अप बनिन् । त्यस्तै बालिका स्कुलकी मनिता शर्मा सेकेण्ड रनरअप भइन् । विजेता नविनाले क्राउनसहित ४० हजार रूपैयासहित केके इन्टरनेसनल स्कुलबाट सतप्रतिशत प्लस टुसम्म अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गरिन् । त्यस्तै फष्ट रनरअप तुम्बाहाम्फेले नगद ३५ हजार रूपैयासहित केकेबाट ५० प्रतिशत छुटमा प्लस टु अध्ययन र शर्माले नगद ३० हजार रूपैयासहित केकेबाटै ५० प्रतिशत छुटमा प्लस टु अध्ययन
प्रकाशित मितिः बैशाख ३१, २०७५
मेन अफ दी वल्र्ड नेपाल हुँदै
काठमाडाै । पुरुष सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘मेन आफ दी वल्र्ड नेपाल २०१८’ हुने भएको छ । मंगलवार राजधानीमा पत्रकार भेटघाट गर्दै आयोजकले उक्त कुरा सार्वजनिक गरेको हो । जुम इन इभेन्टले आयोजनागर्न लागेको यो प्रतियोगिता फिल्पिन्सको फ्रेन्चाइज हो । विवेक सिंह ठकुरीले सञ्चालन कार्यक्रममा अतिथिहरु गायक अनिल सिंह, सञ्चारकर्मी जीपी तिमिल्सिना, प्रतियोगिताको एमडी रुथ मास्के, कोरियोग्राफर आशिक ताम्राकार, अंकित तिवारी, मेन अफ दि वल्र्ड २०१७का विजेता डा. श्रीराम चन्दलगायतले प्रतियोगिताका बारेमा जानकारी गराउनुका साथै प्रतियोगितको सफलताको शुभकामना दिएका थिए । इभेन्टको बुटवल, बिराटनगर, धरान र चितवनमा अडिसन सम्पन्न
प्रकाशित मितिः बैशाख २६, २०७५
बन्ने भयाे बाल गायक अशोक दर्जीको घर
मधुमल्ला । पछिल्लो समय युटुबमा भाइरल बनेका झापा दमकका बालगायक अशोक दर्जीको परिवारका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउने उदेश्ले समिति निर्माण गरिएको छ । मंगलबार दमकमा उर्लाबारीका समाजसेवी पुर्ण वाईबाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भेलाले उनकै संयोजकत्वमा ९ सदस्यिय समिति चयन गरेको हो । समितिको सचिवमा संचारकर्मी जिवन चुडाल, कोषाध्यक्षमा रुपक सापकोटा, सदस्यहरुमा पत्रकार किशोर श्रेष्ठ, अन्नपुर्ण पोष्टका पत्रकार लोकनाथ रिजाल , बिबेक हिङमाङ , केदार बुढाथोकी , ममता राना लगायत रहेका छन् । समितिले अशोकको परिवारका लागी उचित ब्यवस्थापन गर्ने उदेश्यले जग्गाको खोजी गरि घर निर्माण गर्न लागेको संयोजक वाइबाले बताएका छन् । यस
प्रकाशित मितिः बैशाख २०, २०७५